Uyigcina njani ukhuphelo lwakho lweNetflix kwikhadi le-MicroSD | Iindaba zeGajethi
Netflix yenye yezona ndawo zisasazwayo kwaye zisetyenziswayo iinkonzo zevidiyo kwihlabathi liphela. Ikhathalogu yayo enkulu ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zinomtsalane, apho ibisongeza izinto ezinomdla, phakathi kwazo ezimele nje iintsuku ezimbalwa ukubakho kokukhuphela uthotho lwethu oluthandayo okanye iimovie, ukuze sikwazi ukuzibukela ngaphandle kokunxibelelana nenethiwekhi.
Inqaku elibuthathaka kolu sebenziso kukuba ukhuphelo lungagcinwa kuphela kwimemori yangaphakathi yesixhobo, into enokuthi ingabi yingxaki kwabo basebenzisi, umzekelo, i-128GB ye-smartphone, kodwa esiba sisiphazamiso esikhulu ebantwini. ngee-smartphones ze-16GB. Ngethamsanqa namhlanje siza kukufundisa indlela yokugcina ukhuphelo lwakho lweNetflix kwikhadi le-MicroSD.
Njengoko besesitshilo, iNetflix ayisivumeli ukuba sigcine ngokuthe ngqo uthotho okanye iifilimu ezikhutshelweyo kwikhadi lethu le-MicroSD, kodwa inokwenziwa ubuncinci kwiindlela ezimbalwa esiza kukuxelela ngazo kweli nqaku.
1 Hambisa uthotho olukhutshelweyo kunye neemovie kwikhadi le-MicroSD ngokwakho
2 Hlanganisa ukugcinwa kwangaphakathi kunye nememori khadi ye-microSD
Hambisa uthotho olukhutshelweyo kunye neemovie kwikhadi le-MicroSD ngokwakho
Le ndlela esiza kukucacisela yona ngoku ibandakanya ukuhambisa uthotho kunye neemovie ozikhuphele kwikhadi le-MicroSD ngokwakho, kugcino lwangaphakathi. Yi-100% esemthethweni, kodwa ayisiyiyo eyona icetyiswayo kwaye yiyo ngalo lonke ixesha ufuna ukubona nayiphi na ukhuphelo lwakho kuya kufuneka uyibuyisele kwifayile yokugcina yakho okanye ngekhe ukwazi ukuyibona ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi.
Apha sichaza ngokweenkcukacha uhambisa njani uthotho lwakho okanye ukhuphele iimuvi kugcino lwangaphakathi, kwikhadi le-MicroSD yesixhobo sakho;
Okokuqala kuya kufuneka ukhuphele enye yeefayile ezininzi ezivavanywa ezikhoyo kwivenkile yesicelo esemthethweni kaGoogle okanye yintoni efanayo kuGoogle Play. Ingcebiso yethu, ngaphandle kwamathandabuzo, yi-ES Explorer onokuyikhuphelela simahla kwaye iya kukuvumela ukuba uqhubeke nayo yonke inkqubo esiza kukuxelela ngayo.
Fumana ifolda yokukhuphela yeNetflix kule dilesi ilandelayo; "I-Android / Idatha / com.netflix.mediaclient / iifayile / Ukukhuphela"
Kule ndlela kuya kufuneka ubone incwadi eneenkcukacha ".of", onokungakwazi ukuyibona kuqala kuba isikhangeli sakho asibonisi. Ukuba oku kuyenzeka kuwe, tshintsha isikhangeli sakho okanye usebenzise le sicebise ukuba siyenze.
Kule folda ngumxholo wonke owukhuphele kwiNetflix. Ungayisika yonke ifolda kwaye uyincamathisele kwikhadi le-MicroSD okanye uhambise umxholo othile, umzekelo awucwangcisi ukuwujonga kungekudala.
Ingcebiso elungileyo endinokukunika yona, kwaye sendiyiqalisile ukusebenzisa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngengcebiso yomhlobo, yile gcina konke ukhuphelo lwakho kwiifolda ezahlukeneyo. Umzekelo, ukuba ukhuphela zonke izahluko zothotho, zigcine kwifolda, apho unokugcina amaxesha onyaka kwiifolda ezahlukeneyo.
Ngalo lonke ixesha ufuna ukushenxisa into ukusuka kwikhadi le-microSD kugcino lwangaphakathi lwefowuni yakho, kuya kuba lula kakhulu kuba awuzukukhangela into oyifunayo kuba uya kuba nayo yonke into ehlelwe kakuhle.
Hlanganisa ukugcinwa kwangaphakathi kunye nememori khadi ye-microSD
Indlela yokuqala esikubonise yona inobunzima, kodwa iyasebenza kakhulu kwaye ayifani nale yesibini esiza kukubonisa yona, iyasebenza kuye nawuphi na umsebenzisi. Le ndlela yesibini yokusebenzisa ikhadi le-microSD ukugcina izinto esizikhuphelayo esizenzayo kwiNetfix, iyaqhubeka Dibanisa ukugcinwa kwangaphakathi kunye nekhadi le-MicroSD, into ngelishwa ifumaneka kuphela kwi-Android Marshmallow okanye ngaphezulu, kwaye alukho kuzo zonke iinguqu ezisebenzayo.
Emva koko sikubonisa ungayenza njani ikhadi le-MicroSD libe yinxalenye yogcino lwangaphakathi kwaye ke ukhuphele umxholo, ngokungenamda, ukusuka kwiNetflix;
Fomatha ikhadi lakho le-microSD, kuba kuyo yonke inkqubo esiza kuyenza kuyimfuneko ukuba akukho nto uyigcinileyo kuyo. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ikhadi lakho lixhasa isantya sokufunda kunye nokubhala
Fikelela kwisixhobo "Useto" emva koko "Ugcino"
Ngenisa ukhetho lwekhadi le-MicroSD kwaye ulikhethe njengogcino lwangaphakathi. Inkqubo ngokwayo iya kukwazisa ukuba ikhadi liza kufomathwa. Yamkela kwaye ulinde inkqubo igqibe
Ukuba ngoku ujonga indawo yokugcina yangaphakathi okhoyo, uya kuqaphela ukuba oku kunyukile nge-GB yekhadi le-MicroSD
Xa iNetfix yakhululwa ngokusesikweni, uninzi lwethu lwaluzisola ngokuba singakwazi ukonwabela ikhathalogu yayo ebanzi ngaphandle kokufikelela kwinethiwekhi yenethiwekhi okanye ngaphandle kokushiya uninzi lweedatha esinazo ngereyithi yethu. Ngoku le ngxaki isonjululwe kwaye sinokuzikhuphelela uthotho kunye neemovie njengoko sifuna ukubukela ngalo naliphi na ixesha nakwindawo.
Ngezi ndlela zimbini sikubonise zona, unokwandisa inani lokukhutshelwa ngenxa yendlela enye okanye enye onokugcina ngayo imixholo yeNetfix kwikhadi le-MicroSD. Okwangoku kukho amakhadi anexabiso elikhulu le-GB ngoko ke ukhuphelo onokulugcina phantse alunasiphelo.
Khange sitsho kude kube ngoku, kodwa oku kunokwenzeka kuphela kuvulekileyo kwizixhobo ze-Android okoko, umzekelo, akukho iPhone okanye i-iPad enokwandisa ukugcinwa kwangaphakathi. Siza kuqhubeka nokucinga kunye nokucinga ngale ngxaki, kodwa ukuba une-16 okanye i-32 GB ye-iPhone, olu khetho lutsha lweNetflix aluyi kuba luncedo kuwe.
Ngaba ukwazile ukukhuphela kunye nokugcina umxholo weNetflix owuthandayo kwikhadi le-MicroSD yesixhobo sakho?. Sitshele ngamava akho kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngenye yeenethiwekhi zonxibelelwano esikhoyo kwaye usixelele ukuba uyazi ngayo nayiphi na enye indlela yokugcina umxholo wakho okhutshelweyo kwiNetflix kwikhadi le-MicroSD.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyigcina njani ukhuphelo lwakho lweNetflix kwikhadi le-MicroSD
Enkosi kakhulu, iposti ebalaseleyo!
U-Lorenzo Daniel sitsho
Ayindikhonzi! Ngalo lonke ixesha ndihambisa iifayile (indlela yokuqala) iNetflix iyayeka ukuzibona, yiyo loo nto iyanyamalala kuluhlu 'lokuLanda kwam'. Emva koko iifayile ziphume ngempazamo kwaye i-netflix ifuna ukuba ndiyikhuphele kwakhona… sele ndizamile kunjalo kwaye andikaphumeleli kwanto, ke ukuba unazo naziphi na ezinye iingcebiso ndingayixabisa ngokwenene! Ndiyabulisa !!!
Phendula uLorenzo Daniel